How to becomeagood speaker (အပြောကောင်းသမားတစ်ယောက်ဖြစ်လိုသော်) - Myanmar Network
Posted by Myo Myint Kyaw on June 8, 2011 at 22:26 in အင်္ဂလိပ်စာ သိကောင်းစရာ အဖြာဖြာ
အင်္ဂလိပ်ဘာသာစကားသည် ထာဝရရှင်သန်လျှက်ရှိသော ဘာသာစကားတစ်ရပ်ဖြစ်ခြင်းကြောင့်
အင်္ဂလိပ်စာရေးသားခြင်းထက် စကားပြောခြင်းမှာ စင်စစ်အားဖြင့် ခဲယဉ်းလှသည်မဟုတ်ချေ။ အောက်ပါ
"You Leaving?" (သွားတော့မလား။)
"About noon" (နေ့လည်လောက်။)
"By which" (ဘာနဲ့လဲ။)
"With Mg Mg's car" (မောင်မောင်ကားနဲ့။)
"Well, nice trip" (အံမယ်၊ ကောင်းသားပဲ။)
"See you then" (နောက်တော့မှ တွေ့ဦးမယ်)
အင်္ဂလိပ်စကားကိုဝါကျရှည်သုံးကာ ပြောစရာမလိုတော့ပါ။ ငါသည်စာရေးနေသည်မဟုတ်။ စကားပြောနေတာပါလားဟူသော အသိစိတ်ဓါတ်ကို မွေးထားဖို့သာလိုသည်။
"Are you leaving?" (သွားတော့မလား)
"Yes, I'm leaving." (ဟုတ်ကဲ့.. သွားတော့မယ်။)
" When are you leaving?" ( ဘယ်တော့သွားမှာလဲ)
"I'll go about noon" (နေ့လည်လောက်သွားမယ်)
"By which vehicle will you go?" (ဘာယာဉ်နဲ့သွားမှာလဲ)
"I'll go with Mg Mg's car. (မောင်မောင်ရဲ့ကားနဲ့သွားမယ်)
"Very well, It is nice trip." (ကောင်းတာပေါ့၊ သာယာတဲ့ခရီးဖြစ်မှာပါ)
သဒ္ဒါစည်းကမ်းကို ဂရုစိုက်လွန်းပြီး အထက်ပါအတိုင်းပြောပါက နေရာကျမည်မဟုတ်ချေ။ နားထောင်ရသူမှာလည်း
အင်္ဂလိပ်စကား၏အဓိကသော့ချက်မှာ အသံထွက် (Pronunciation) နှင့် အဖြတ်အတောက် (Intonation) ပင်ဖြစ်သည်။ ဤနှစ်ချက်မပိုင်သမျှကာလပတ်လုံး အဂ်လိပ်စကားကို အင်္ဂလိပ်၊ အမေရိကန်စသော ဥရောတိုက်သား များ၏ နားထဲသို့ရိုက်သွင်းသလို၊ နားလည်အောင်ပြောဖို့မဖြစ်နိုင်ဟု အမြဲသတိချပ်ရပေမည်။
မြန်မာပညာတတ်အများစုမှာ အင်္ဂလိပ်လိုရေးတတ်ကြသော်လည်း အင်္ဂလိပ်လိုပြောဖို့ကိုမူ အတော်ကလေးရွံ့ကြ သည်ကိုတွေ့ရပါတယ်။
မည်သည့်ဘာသာစကားရပ်တွင်မဆို အသံထွက်မှာ အထူးအရေးကြီးလေသည်။
အသံပီသလာအောင် သင်ယူရာ၌ တိုးတိုးတိတ်တိတ်လုပ်မနေဘဲ၊ အရှက်အကြောက်ကို အသာဘေးချိတ်ထားပြီး အဖြတ်အတောက်လေယူလေသိမ်းကောင်းစေရန် အသံထွက်ပြီးစာဖတ်ခြင်း၊ တတ်သိနားလည်သူများ ကို မေးမြန်းခြင်းပြုသင့်ပေသည်။
ထိုကြောင့်အပြောကောင်းသမားတစ်ဦးဖြစ်လိုပါက စကားလုံး-စကားတွဲများကို အသံထွက်မှန်မှန်ဖြင့် ပြောနိုင်အောင် ကြိုးစားရပေမည်။ အဘိဓာန်နှင့်အသံထွက် ဥပဒေစည်းကမ်းများကို တရားသေလိုက်နာနေသော မိတ်ဆွေသင်္ဂဟများကို အားကိုးနေရုံမျှဖြင့်လည်း မပြီးပါချေ။
Credit & Refer - How To Speak English Well! by U Phone Myint (Shwe Min Wun)
Permalink Reply by 0u6ystlegednl on June 9, 2011 at 15:20
Permalink Reply by Phyo Min Khaing on June 10, 2011 at 8:45
Permalink Reply by 1tvu59ccj2avt on June 10, 2011 at 13:27
Permalink Reply by zan zan on June 10, 2011 at 17:30
Not so bad! but.....in my opinion, we have to try long sentences like native speakers, if you want to improve your English Skills. May be i am wrong.
Permalink Reply by Thu Zar aung on July 25, 2011 at 15:05
Permalink Reply by Tin Htar Lwin on August 11, 2011 at 14:56
Permalink Reply by 0l49jxhbb0stg on August 16, 2011 at 20:53
Permalink Reply by 22sciwgjr4lu5 on September 21, 2011 at 17:44
Permalink Reply by 1x1vvk92kwf7f on October 5, 2011 at 21:59
Permalink Reply by ayemyo on October 9, 2011 at 9:19
good your idea.
Permalink Reply by Marlar on October 10, 2011 at 12:09
Permalink Reply by myokoko on October 22, 2011 at 13:15